ko htike's prosaic collection: ပြန်လှန်တွေးခေါ် တိုက်ခိုက်ခြင်း
တွေးနည်း ပေါင်းစုံ ရှိပါတယ်။
တော်လှန်ရေး ကာလမှာတော့ ပြန်လှန် တွေးခေါ် တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာကို သုံးသင့်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေး အတွက် Think Tank အဖွဲ့တွေ များများလိုပါတယ်။
လက်ရှိ နအဖကို ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး လုပ်နေရာမှာ အဲဒီလို ပြန်လှန်တွေးခေါ် တိုက်ခိုက်ခြင်း မလုပ်နိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့ ခံစစ် ဖြစ်နေရမှာပါပဲ။ သူ့ဘက်က တိုက်လာတဲ့ တိုက်စစ်ကို ဘယ်လို ခုခံရမလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးအချိန်ကုန်နေရင်တော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုခံမှု ပြုနေရုံနဲ့တင် ရပ်မနေဘဲ၊ ခုခံရင်း ပြန်တိုက်၊...... တပြိုင်နက်ထဲမှာ နောက်ထပ် တိုက်စစ်တွေ ဘယ်လို ဆက်လက် ဆင်နွဲမလဲဆိုတာပါ တခါတည်း တွေးခေါ် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရပါမယ်။
လက်တွေ့ မြေအောက် တော်လှန်ရေး လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေကြသလို၊..... ပြည်သူလုထု စိတ်ဓါတ်အတွက်လည်း မြေပေါ် တိုက်ခိုက်ရေးတွေကို လုပ်ပြပြီး စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ပေးရပါမယ်။ မြေပေါ် မြေအောက် ဟန်ချက် ညီဖို့ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။
လက်တလော ကိစ္စကိုဘဲ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ နအဖက ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီး တိုက်စစ်ဆင်လာပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ ဖုန်းကွယ်ပြီး လိုက်လာတဲ့ ခေါင်းစဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပေးမဝင်ဘူးတဲ့။ နအဖတွေကို ငတုံးတွေလို ဘယ်သူ ပြောလဲ။
လူတွေက road map (၇) ချက်ကို လက်မခံဘူး၊ ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဘူး ပြောနေချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခွင့် မပြုဘူး လုပ်လိုက်ပါတယ်၊ အတော်ပါးနပ်ပြီး ကောက်ကျစ်တဲ့ နအဖပါ။ ပုံပြင်ထဲက မြေခွေးကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတာ နအဖကိ်ု ခြေဖျားတောင် မမှီပါဘူး။
သူက ဒေါ်စု ကိစ္စ ပြောလိုက်တော့ ... လူတွေက ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာလို့ ဒေါ်စု မပါရမှာလဲ။ ပါခွင့် ပြုရမယ် ဖြစ်လာပါရော။ .. ကဲ ဒါဆို ... သူတို့ ပြောတဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာတွေကို လူတွေက လက်ခံလိုက်ပြီပေါ့ ... ။
နအဖရဲ့ ကလိမ်ကျတဲ့ ကောက်ကျစ်မှုကို သာမန်ပုံနဲ့ ရိုးရိုးသားသား ကြည့်လို့မရတော့ပါဘူး။
နောက် ထပ် တစ်ခုက .. အခု လူတွေက ဆွေးနွေးလာကြတယ်။ ကန့်ကွက်မဲပေးမယ်ပေါ့၊ .. ဟာ .. ဒါဆို road map (၇) ချက်ကို ပြည်သူတွေက လက်ခံလိုက်ပြီပေါ့။ အဲဒါ ပြဿနာပါ။
ကန့်ကွက်မဲ မပေးဘဲ လုံးဝ ဆန္ဒပြမယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီကောင်တွေက ကြံဖွတ်တွေ သုံးပြီး သဘောတူညီမှု ယူလိုက်ရင် တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျပြီ။ ...
ကဲ ဒီတော့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ပြည်သူတွေကို ဘာ message ပေးမလဲ။
ဒီနေရာမှာ “ပြန်လှန်တွေးခေါ်တိုက်ခိုက်ခြင်း”ကို သုံးကြည့်လို့ ရနိုင်မလား။ ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ...။ ဘယ်လို ပြန်လှန်တွေးခေါ် တိုက်ခိုက်မှာလဲ။ ? ? ?
အဲဒိ အချက်တွေကို အားလုံး စဉ်းစားဖို့ လိုနေတယ်လို့ ထင်လို့ ထောက်ပြကြည့်တာပါ။ တကယ်လို့ ပြန်ပြီး တိုက်ခိုက်လာနိုင်ရင် နောက်ထပ် ထပ်ချက် မကွာ ဘယ်လို တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဆက်လုပ်မှာလဲ ဆိုတာကိုပါ တပြိုင်ထဲ တွေးခေါ် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့က နအဖနဲ့ တိုက်ခိုက်ရာမှာ systematic revolution ဖြစ်ဖို့ လိုနေကြောင်းပါ။
်ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့ “ပြန်လှန်တွေးခေါ်တိုက်ခိုက်”နည်းကတော့ နအဖ စစ်အုပ်စုက တဖက်သက် ရေးထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူလူထုက ကန့်ကွက်မဲဝိုင်းပေးကြပြီး၊ တိုင်းရင်းသားတွေပါတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးကို တောင်းဆိုဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သင့်ကြောင်း ထင်မြင် ယူဆမိပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 16:16
Labels: မြန်မာ့နိုင်ငံရေး, တွေးမိသော အကြောင်းများ
There are two ways for referendum.
The first way is voting "NO" in referendum.
The second way is to boycott the referendum.
the first way is better to ask junta for re-writing constitution with the senators of 1990 election.
The second way is better to ask junta for three parties (junta,NLD,ethnic groups) dialog.
17 March 2009 at 06:55
聊天室入口 yamek21 聊天室入口ut 聊天室入口免費視訊聊天室入口情色電影院重車論壇☆♀ 愛愛影片 ☆♀☆♀ 一葉情成人貼圖片區 ☆♀☆♀ 夜激情成人聊天室 ☆♀♀ 免費體驗視訊聊天 ♀☆♀ 視訊聊天美女 ☆♀0204情愛視訊聊天網☆♀ 免費影音視訊聊天 ☆♀☆♀ 激情成人網愛聊天室 ☆♀☆♀ 視訊聊天辣妹 ☆♀☆♀ 網路視訊聊天 ☆♀情色網☆♀ 一夜激情交友聊天室 ☆♀免費成人影短片下載☆♀ 視訊影音聊天 ☆♀☆♀ 夜未眠成人影城 ☆♀情色短片☆♀ 免費網友自拍影片 ☆♀☆♀免費視訊交友聊天室 ☆♀☆♀ 情色電影院☆♀☆♀ 限制級影片 ☆♀☆♀ 限制級影片 ☆痘痘聊天室☆♀ 成人聊天網 ☆♀☆♀ 成人影片 ☆♀☆♀ av女優影片 ☆♀三級電影av情色網☆♀ 成人影視☆♀色咪咪影片網sex5220免費影片尋夢園上班族聊天室影音視訊聊天室ut聊天聯盟電愛聊天室琉璃仙境聊天室080苗栗聊天室sm聊天室桃園聊天室一夜情援交聊天室情色皇朝聊天室愛情紅綠燈視訊網愛交流區哈啦聊天室免費正妹視訊熱舞秀買春視訊視訊網愛聊天室蠻女都會男女視訊聊天室妹妹影音視訊聊天室即時通視訊女郎視訊館上班族1對1視訊視訊美女館主播情人視訊辣妹妹影音視訊聊天室激情網愛聊天免費UT視訊交友亞洲情色視訊交友s383情人視訊甜心寶貝直播免費aa片試看sex520免費影片免費自拍情色電影偷窺大本營台灣妹妹情色貼圖gir貼圖下載區激情成人網愛聊天室檳榔西施自拍照片寶貝馬子貼圖網金瓶梅貼圖007成人網情色貼圖台灣無限貼圖區美女工廠貼圖區無名辣妹自拍自拍偷窺貼圖區亞洲超人氣情色貼圖歐美街頭自拍蟲蟲聊天室特兒素人自拍貼圖八國聯軍成人自拍貼圖區ㄧ葉晴成人貼圖片區唯我獨尊成人貼圖片區愛愛成人貼圖片區香港護士自拍貼圖區成人美少女自拍貼圖淫蕩天使情色網小魔女自摸自拍自拍做愛貼圖一夜情聊天室104自拍美女貼圖本土自拍寫真情色典獄長天使情色貼圖女孩自拍淫蕩天使情色貼圖成人貼圖站激情自拍館網友自拍,真實自拍貼圖成人自拍,網友自拍自拍盜攝館愛情公寓聊天室高雄一夜情聊天室學生族視訊BT成人論壇月光情色論壇愛情花園聊天室Girl美女視訊聊天室
5 April 2009 at 19:42